MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA DACHSHUND IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Dachshund iyo Sawiro
Lahaanshaha sawirka R iyo R Kennels
Gunta yar ee Dachshund
Eyga Yar Yar
Eyga Yar ee Burrow
Waxaa jira saddex nooc oo Dachshund ah: kuwa gaagaaban, kuwa siligga leh, iyo kuwa dhaadheer. Mid kasta oo ka mid ah noocyadan waxaa jira saddex cabbir. (Eeg Dhererka iyo Miisaanka.) Jirka Dachshund wuu ka dheer yahay mid dheer, murqo leh lugaha gaagaaban. Waxay leedahay madax dherer ah iyo xoogaa, qalfoof qaloocsan oo ku xardhan sunnayaasha soo baxa. Afku wuu dheer yahay. Daanka waa mid adag oo bushimaha aan ku xirnayn. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Indhaha u eg yicibta waa casaan madow ama bunni-madow. Dhegaha mobilada ayaa dhegta u sudhan dheer. Jidhku wuxuu leeyahay sternum xoog leh oo soo baxaya iyo caloosha oo si dhexdhexaad ah u soo noqotay. Dabada ayaa lagu qaadayaa iyada oo saf ah oo dhabarkiisa ah. Dharka timaha gaaban ee Dachshund waa inuu noqdaa mid dhalaalaya, dhalaalaya oo labbisan.
Dachshunds waxay leeyihiin noocyo midabbo kala duwan ah. Waxay kala yihiin sidan soo socota.
Midabada adag waa: madow, casaan ah (laga bilaabo miraha cagaarka ilaa miisaanka qotada dheer), shukulaatada (bunni), isabella (tan ama fawn), kareem (midab madow oo aan lahayn wax casaan ah, laga bilaabo midabka dahabiga ah ilaa platinum (kan ka fudud ayaa ka fiican) Noocyada kala duwan ee siligga siligga leh, kareemka waxaa loo yaqaan 'sarreen'.
Bicolor Dachshunds waxaa laga yaabaa inuu yahay madow iyo madow, madow iyo moofo, shukulaatada iyo tan, shukulaatada iyo dubka, buluug iyo buluug, ama buluug iyo creme. Isku-darkaas, midabkii hore waa midabka salka, tanka ama creme-ka ayaa ka muuqda wejiga iyo dhibcaha. Sable waa jaakad salka cas oo leh dusha sare madow. Noocyada kala duwan ee siligga siligga leh, waxaa sidoo kale jira xayawaan duurjoog ah, oo gaar u ah in timaha laftiisa ay yihiin casaan iyo madow.
Qaababka iyo tricolor:
Brindle: gogosha waa in lagu xoqaa jirka oo dhan waxaana laga arki karaa midabbada kor ku xusan midkood.
Dapple: dappling waxaa loo soo bandhigaa sida balastar midab khafiif ah ku leh midabka salka madow. Tani waxay keeni kartaa Dachshund saddax midab leh. Tusaale: madow oo leh dhibco cagaaran iyo qalin jilicsan. Haddii caafimadku ku dhaco isha, mid ama labada indhoodba waxay noqon karaan buluug. Laba jibbaar laba jibbaar kaliya waxay dhacdaa marka siire iyo biyo xidheen labaduba la jaro, waxayna keenaysaa in meelo waaweyn oo cadaan ah lagu daro qaabka gogosha. Waxaa jiray cilado hidde ah oo loo aaneeyay taranka laba jibbaaran.
Piebald: piebalds-ka ayaa noqon kara midab midab leh ama midab leh. Waxay leeyihiin jidh cad oo leh dhejisyo mid ama laba midab oo adag leh, sida casaanka oo cad, ama madow iyo midab madow oo cad. Balastarka ayaa laga yaabaa inay u dhexeeyaan dhawr dhibic ilaa ay ka gaarayaan in ka badan boqolkiiba 50 jirka. Waxaa jiri kara shilinta aagagga cad oo dhan, ama waxay noqon karaan caddaan adag.
Haddii ay dhacdo qaabab taran iskutallaab ah, sida kuwa loo yaqaan 'dapple to piebald' ama 'brindle to piebald', balastarrada adagi waxay muujinayaan qaabka gogosha ama gogosha. Diiwaangelintu waxay kuxirantahay naadiga keydka eeygu ka diiwaangashan yahay, laakiin marka la eego hal qaab oo keliya oo la diiwaangeliyo, eeyga waa in loo diiwaangeliyaa inuu yahay piebald.
Dachshund waa mid xiiso leh, xariif ah, nool, kalgacal leh, isla weyn, geesi ah oo maad leh. U heellan qoyskeeda, waxay noqon kartaa wax yar adag tahay in la tababaro iyo jabka guriga , laakiin macquul maahan. Dachshunds si fiican ayey u safraan. Eygan yari waxa uu u baahan yahay milkiile fahmaya sida uu isagu u yahay hogaamiyaha xirmada ama isagu wuu la wareegi doonaa guriga, oo wuxuu bilaabi doonaa inuu isku dayo oo u sheego milkiilaha wuxuu sameynayo. Haddii eeyga loo oggolaado inuu la wareego, dhibaatooyin badan oo xagga dabeecadda ah ayaa soo bixi doona, sida, laakiin aan ku xaddidnayn, ilaalinta alaabta guriga , kala-go'id walaac , ilaalinta cuntada, alaabta carruurtu ku ciyaarto ama waxyaalo kale, dharbaaxo, qaniinyo iyo ciil badan. Waxay noqoneysaa mid aan la saadaalin karin carruurta iyo dadka waaweyn ee aysan aqoon. Haddii ay runtii xumaato, waxay noqon kartaa mid aan la saadaalin karin milkiilaheeda. Badanaa waxaa lagula taliyaa carruurta da'da weyn, tixgelinta leh, si fudud sababtoo ah milkiilayaasha badankood ma muujiyaan hoggaan xirmo habboon eeyaha yaryar, taas oo keeneysa ilaalin dhexdhexaad ah ama daran, dabeecad isbeddelaysa haddii bini-aadamku bilaabo inuu noqdo hoggaamiye kooxeedkooda. Haddii ay helaan hoggaan sax ah, waxay si wanaagsan ula wadaagi karaan carruurta. Noocani wuxuu leeyahay dareen lagu qodo. Guud ahaan way ku fiican yihiin xayawaanka kale si kastaba ha noqotee, mar labaad, iyaga oo aan lahayn hoggaan sax ah iyaga aadanaha , waxay noqon karaan kuwo masayr ah, xanaaqsan, madax adag oo dhaqso u qaniinya, mararka qaarkoodna diida in wax laga qabto. Haddii aad u ogolaato eeygaaga yar inuu la wareego gurigaaga, eeygu wuxuu isku dayi doonaa sida ugu adag inuu dadkiisa oo dhan safka ugu hayo — culeys aan la saarin garbaha ey kasta, gaar ahaan midka u macaan sida eeyga yar sida Dachshund oo kale . Dabeecadahaas xun ma ahan astaamaha Dachshund, waa iyaga cillad yar oo ey astaamaha. Micnaha, milkiilayaasha badankood waxay ula dhaqmaan eeyahooda yaryar sida dhalaanka oo kale, halkii ay ka siin lahaayeen hoggaamin, Iyo sidoo kale xeerar ay u baahan yihiin inay raacaan oo ay la socdaan xadka ay yihiin, oo aan loo oggoleyn inay sameeyaan, taas oo eeyaha oo dhan si dabiici ah u jecel. Dachshunds oo leh hoggaan aadanaha oo ay weheliso a socod baako maalinle ah waa asxaab qoys oo cajiib leh dabeecad wanaagsan.
10 toddobaad jir bulldog ingiriis
Waxaa jira saddex nooc oo Dachshund ah, kuwa gaagaaban, kuwa siligga leh, iyo kuwa dhaadheer. Marka loo eego heerka AKC, waxaa jira laba cabbir, Standard iyo Miniature. Si ka duwan AKC, Yurub sidoo kale waxay aqoonsan tahay noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'Toy' oo loo yaqaan kaninchen, oo ah erayga Jarmalka ee bakaylaha.
Heer: Dhererka 8 - 11 inji (20 - 27cm) Culeys - ka badan 11 rodol (4.9 kg) da'da 12 bilood.
Guntin: Dherer ilaa 5 - 7 inji (13 - 18 cm) Miisaanka 11 rodol (4.9 kg) ama ka yar da'da 12 bilood.
Cayaaraha: Dhererka illaa 12 inji (30 cm) Miisaanka 8 rodol (3.5 kg) da'da 12 bilood.
Xusuusin: Shuruudaha aan rasmiga ahayn sida tweenie, dwarf, toy, teaup ama micro-mini Dachshund ma ahan noocyo kaladuwan oo loo aqoonsan yahay AKC, hase yeeshe kuwa wax soo saara qaarkood ayaa adeegsanaya ereyadan waxayna ku tarmayaan ey yar. Naanaysyo kale oo aan rasmi ahayn oo ay dadku ku calaamadiyeen noocyadan ayaa kala ah Wiener Dog, Little Dog Dog, Dog Dog iyo Dog Sausage.
Naaneysta 'tweenie' waxaa badanaa loo adeegsadaa si aan rasmi ahayn markii cabbirka uu u dhexeeyo ka yar iyo heerka.
Dhibaatooyinka ku dhaca laf-dhabarka (Dachshund paralysis), dhibaatooyinka kaadi mareenka, cudur wadne iyo sokorow. U janjeera burooyinka unugyada . Dachshunds waxay u janjeeraan inay cayilaan oo caajis noqdaan. Tani waa khatar caafimaad oo halis ah, oo culeys dheeraad ah saareysa dhabarka.
Waxay kufiicantahay nolosha guryaha. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Kuwani waa eeyo firfircoon oo leh awood la yaab leh oo ay u baahan yihiin inay noqdaan socday maalin kasta . Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan fadhiyada ciyaarta ee jardiinada ama meelaha kale ee nabdoon, ee furan. Ka taxaddar, si kastaba ha noqotee, marka dadka lugeynaya ay ku dhowdahay maxaa yeelay Dachshunds waxay u badan tahay in cagta la saaro marka loo eego eeyaha muuqda. Waa inay ka niyad jabiyaan inay boodaan, maadaama ay u nugul yihiin dhaawaca laf-dhabarka.
Timo dhaadheer waxay u baahan tahay shanleyn maalinle ah iyo burushka timaha dhaadheer waxay u baahan yihiin jarista xirfadleyda laba jeer sanadkii, iyo timo gaaban waxay u baahan tahay jajab joogto ah oo leh maro qoyan. Noocani waa celcelis daadiya.
Dachshund wuxuu asal ahaan ka yimid Jarmalka horaantii 1600s. Loogaadiyay ugaarsiga ugaadh yar sida bajaaj iyo bakayle , Dachshund wuxuu soo gaabiyay lugaha si ay ugaarsadaan oo ay ula socdaan xayawaanadan si ay dhulka ugula dhigaan godadka ay ku dagaallami karaan ugaadhsiga ilaa dhimashada. 'Dachs' waa erayga badger. Dachshunds yar oo lagu kariyo in lagu ugaadhsado bakaylaha iyo xayawaanka. Dachshunds waxay leeyihiin astaamo badan oo 'terrier' ah. Iyagu waa eeyo is-bedbeddela oo geesinimo leh waxaana lagu yaqaannay inay qaataan dawacooyinka iyo kuwa kale. Taranka dadka ayaa yaraaday intii lagu jiray Dagaalkii Dunida l, laakiin eeyaha ayaa laga soo waariday Jarmalka ilaa USA iyo hidda-wadaha ayaa mar kale kordhay. Dachshund wuxuu AKC aqoonsaday 1885.
Sidoo kale noocyada caadiga ah ee ANKC, CKC, APRI, ACR
Dexter ka siman Dachshund
Turbo the dapple Dachshund oo 2 sano jir ah— Magiciisa ayaa ku habboon. Isagu waa buunbuunin laakiin isla waqtigaas waa mid aad u jecel. '
Bentley the Mini Dachshund oo 9 bilood jira— 'Bentley waxaa i siiyay saaxiibkey, oo leh hooyadiis iyo aabahiis waana uu ku farxay! Isagu waa dhagoole , laakiin haddaan laguu sheegin, weligaa ma ogaan doontid! Wuu yaqaana astaamaha / astaamaha gacanta, sidaa darteed wuu ogyahay dhamaan waxyaabaha eygu maqlo ogyahay. Isagu waa caqli badan yahay waana uu leeyahay indho buluug ah , laakiin midi waa cirka buluug kan kalena waa 1/2 cir buluug ah iyo 1/2 RUN DHAR MADOW. Meel kasta oo aan joogo waxaad ka heli doontaa Bentley midig gadaashayda, xitaa suuliga. Isaga waan ooyayaa waqtiga oo dhan markaan qubaysto , ha i weydiinin sababta! lol Bentley waa wiilkeyga quruxda badan.
'Scrappy (gadaal) waa 7 jir lab caadi ah Dachshund iyo Moxie (xagga hore) waa gabar 9 bilood jir ah oo yar yar oo qalin ah oo loo yaqaan' dapple Dachshund '.
'Russell waa hal sano jir casaan bir ah oo loo yaqaan' Dachshund '. Waa nin faraxsan-nasiib-jecel oo qof walba jecel, wuxuu had iyo jeer helaa waddo uu ku geli karo dhabtaada si uu wejigaaga u leefleeco oo uu saacado kuu salaaxo. Wuxuu hadiyad sanad guuradeed u ahaa hooyaday, maxaa yeelay tani had iyo jeer waxay ahayd eeygeeda riyada. Isagu waa ninka ugu yar ee ugu macaan!
Qalab yar oo yar oo Ey yaryar ah Dachshund 10 toddobaad
Oreo waa qurux badan, firfircoon, doqon ah, dhaadheer, piebald mini Dachshund.
'Kani waa Avery, oo ah nooca dhaadheer ee dhaadheer ee Dachshund oo qiyaastii 5 bilood jir ah. Iyadu waa kareem kareem Ingiriis ah piebald dapple Dachshund waana astaanta muuqaalka. Waxay jeceshahay ugaarsiga, qodida iyo jilifta oo xiisaha ay u qabto waa baacsiga shimbiraha iyo jiirka ardaaga. In kasta oo ay u muuqato inay tahay 'eey da' yar ', haddana hubaal way ogtahay sida loo wasakheeyo! Iyadu waa a gabar yar oo madax adag , laakiin gabi ahaanba waxaan jecelahay inaan iskula seexdo sariirta buste aniga oo ila jooga. '
'Oscar waa shan sano jir ka soo badbaadiyay Dachshund kooxda Hearts United ee loogu talagalay Xayawaanka, oo ah hoy aan la dili karin oo ku yaal koonfurta bari ee Nebraska. Wuxuu nala joogaa muddo ku dhow sanad hadda. Isagu waa hal cunug oo xumaaday! Isagu waa madow iyo buluug 'Tweenie,' (oo u dhexeeya istaandarka iyo kan yar). Waxaa lala korsaday walaashiis 'Dollie'. Waxay ka yimaadeen isla gurigaas waxaana iska saaray milkiilayaashoodii hore garaash garaash ah oo ay ku qoran tahay 'Bilaash Guri Fiican.' Waxaan ku boorineynaa taageerida hoyga aan-la dilin oo aan taageerno baabi'inta mashiinnada eeyaha! '
'Eeygaygu waa mini Dachshund minipple ah, oo halkan lagu muujiyey 5 bilood jir. Buddy waa nin aad u nusqaan ah maxaa yeelay Isaga ayaan u lugeeyaa maalin kasta, oo isagu runtii jecel yahay. Buddy waa qof caqli badan waxaan baray isaga inuu fadhiisto, jiifo, rogrogo, ruxo, hadlo, dhinto ciyaar, iyo goobaab (waa halka uu ku ordi doono goobada). Isaguna meel buu fadhiisan karaa oo meel fog buu la seexan karaa. Waxaan rabaa inaan ka helo CGC-ga (Canine Good Citizen). Waa wax aad u qosol badan isaga oo daawanaya isaga oo ku ciyaaraya shaybaar shukulaato ah oo aan socdo. Waa inaan ka taxaddarnaa markay ciyaarayaan farqiga u dhexeeya awgeed. Buddy waa u hogaansan yahay eeyaha kale wuxuu u kori doonaa eey kale oo dhabarka ayuu u foorari doonaa. Waxaan kor u qaaday Jidka Cesar maalinti koowaad waxaanan doonayaa inaan noqdo Ey Xiiqsan. Buddy dhab ahaantii waa canine isku dheelitiran. Waxaan haystaa dhammaan xilliyadii eeyaha eyga oo DVD ku jira oo aan akhriyey dhammaan buugaagtiisii. Anigu waxaan ahay taageere weyn, eeyguna waa isku dheelitiray maalinti koowaad. Anigu waxaan ahay socod eey hadda waxaan ku socdaa eey kasta Cesar's Way sidaas darteed Buddy wuxuu ku jiraa xirmo eeyo ah.
Gretta the Dachshund oo ah 20 bilood jir
Eeg tusaalayaal badan oo Dachshund ah
Sawirada Dachshund 1
Sawirada Dachshund 2
Sawirada Dachshund 3
Sawirada Dachshund 4
Sawirada Dachshund 5
Eeyaha Dachshund: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
Jack chihuahua dheer lehba Russell isku darka
Springer ingiriisiga spaniel isku darka sarkaal oo dahab ah
cocker spaniel heerka poodle isku darka